HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo xiiseyneysa Xidiga Mason Mount ee Kooxda Chelsea
November 22, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay bartilmaameed ka dhigtay xiddiga khadka dhexe ee kooxda chelsea ee Mason Mount .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa la sheegay inuusan ku faraxsanayn Blues oo aan dooneyn inay horumariso qandaraaskiisa, taasoo keentay inay soo baxaan warar xan ah oo la xiriirinaya inuu ka tagayo Stamford Bridge.
Sida laga soo xigtay Fichajes , Los Blancos ayaa haatan noqotay kooxdii ugu dambeysay ee shaaca ka qaaday xiisaha ay u qabto Mount, taasoo la sheegay inay soo jiidatay indhaha Manchester City iyo kooxda heysata horyaalka Jarmalka ee Bayern Munich .
Cusboonaysiinta noocan oo kale ah ayaa ku soo beegantay iyadoo ay jiraan arrimo qandaraasyo oo kala duwan oo Chelsea ah, iyadoo daafaca dhexe ee Antonio Rudiger uusan weli ku heshiin kordhinta qandaraaskiisa haatan ee dhacaya xagaaga, si la mid ah daafacyada kale ee Andreas Christensen , Thiago Silva iyo Cesar Azpilicueta .
Mount, oo markii ugu horreysay soo galay kooxda Chelsea bilowgii xilli ciyaareedka 2019-20 oo uu tababare u ahaa Frank Lampard , ayaa dhaliyay seddex gool, waxaana uu caawiyay labo gool sagaal kulan oo Premier League ah ilaa haatan ololahan.
22 jirkaan ayaa rikoorkiisa kor u qaaday 20 gool iyo 17 caawin 121 kulan oo uu u saftay kooxda reer London, oo uu ku jiro caawinta goolkii ay ku guuleysteen finalkii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore.